Fikarohana momba ny firaisana Fiainana taloha ho an'ny Filoha George HW Bush ho Britanika Admiral Richard Howe: Na dia tovovavy miaramila ho an'i Grande-Bretagne tao amin'ny Ady Revolisionera Amerikana, Howe dia Mpisolovava ho an'ny Demaokrasia - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
George HW Bush amin'ny maha-teraka tamin'i Admiralin'i Richard Howe
Raha manao fikarohana momba ny bokiko aho, Fiverenan'ny revolisionera, misy ireo tarehimarika teraka tamin'ny laoniny avy tamin'ny Ady Tolom-piavotana amerikana, fiainana taloha ho an'i George HW Bush no nambara Izy dia amiraly britanika, Richard Howe, izay nibaiko ny andian-tsambo britanika notendrena hametraka ny Revolisiona Amerikanina, izay natomboka tany Boston, Massachusetts.
Na dia tsy mitovy aza ny fitoviana tarehimarika ao amin'ity tranga ity, dia mitovy ny rafitra taolana. Ny endriky ny taolam-paty dia toa mitoetra ho tsy miovaova amin'ny fiainana iray manontolo amin'ny hafa, na dia mety hovana amin'ny alalan'ny fototarazo aza ny fifehezana marefo. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Napetrak'i Richard Howe tao amin'ny seranan-tsambon'i Boston ny sambony, niaraka tamin'ny tafondro marobe an'ireto sambo ireto handrava ny tanànan'i Boston.
Na dia tamin'ny fotoana nananan'i Britain fahefana miaramila lehibe indrindra eran'izao tontolo izao aza, George Washington, izay notendrena ho mpitarika ny Tafika Amerikanina Patriot avy amin'i John Adams, dia nitondra ny tafika an-dranomasina britanika avy tao amin'ny Harbor Harbor tamin'ny alàlan'ny fametrahana artillery voasambotra tamin'ny Battle of Ticonderoga eny amin'ny havoana manatrika an'i Boston. Fantatr'i Howe fa raha voaroaka ny tafondro, dia ho ringana ny sambony.
Mba hisorohana ny loza ho an'ny Navy Britanika, dia nandidy ny sambony i Howe mba hiala tao Boston Harbor. Io no fandresena voalohany nataon'ny miaramila tany Etazonia.
Mariho fa i George HW Bush dia mpanamory fiaramanidina amerikana novonoina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Araka izany dia maherifon'ny ady amerikana tamin'ny vanim-potoana ankehitriny izy, fa tamin'ny naha Richard Howe dia mahery fo miaramila anglisy nandritra ny tolom-bahoaka Amerikanina.
Nandritra ny fiezahana ny hahatakatra ity fizotry ny hetsika ity dia nanontany momba ity toe-javatra ity aho tamin'ny mpitarika fanahy an'i Ahtun Re, izay niara-niasa tamin'ny alàlan'ny fitaovan'i Kevin Ryerson hatramin'ny taona 2001. Ahtun Re dia naneho ny fahaizany manao lalao marina amin'ny fiainana taloha. Nanontany an'i Ahtun Re aho hoe ahoana ny amiraly amiraly britanika iray tamin'ny ady revolisionera amerikana lasa filohan'i Etazonia, firenena izay fahavalon'i Howe teo aloha.
Ahtun Re dia nilaza tamiko fa na dia mpanompo mavitrika ho an'ny fireneny, Great Britain, ny amiraly Howe, dia nanana fangorahana lehibe ho an'ny foto-kevitry ny firenena iray tarihin'ny olom-pireneny izy fa tsy tamin'ny mpanjaka napetraka tamin'ny fiaviana nolovaina. Na dia tsy nivadika tamin'ny fireneny aza i Howe, dia nahaliana azy sy nanohana ny filam-banin'ny firenena amerikana vaovao. Eny tokoa, ireo boky tantara dia nanamafy ny fangorahan'i Richard Howe an'ireo idealy amerikana.
Amin'ny maha-fanahy azy, i Richard Howe dia nikasa ny hiverina any Etazonia mba ho lasa iray amin'ireo mpisolovava sy mpitarika azy.
George W. Bush ho Renivohitry ny Patriot Daniel Morgan sy Al Gore ho toy ny Horatio Gates Reborn
Amin'ny tranga iray mifandraika amin'izany, ny zanakalahin'i George HW Bush, ny filoha George W. Bush, dia voatonona ho manamboninahitra amerikana Patriot amerikana Daniel Morgan, izay mahery fo tamin'ny Battle of Ticonderoga. Ny jeneraly tia tanindrazana miadidy an'io ady io dia i Horatio Gates. Gates dia nidera ny herim-pon'i Morgan tamin'ny ady Ticonderoga.
Horatio Gates tamin'ny vanim-potoana ankehitriny dia fantatra amin'ny anarana hoe Al Gore, izay mpanohitra an'i George W. Bush tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana tamin'ny 2000. Nanadihady tamin'ny radio nataona ilay mpanelanelana ara-tsaina sy ara-batana Uri Geller tamin'ny taona 2000 talohan'i George W. Bush aho. nandresy an'i Al Gore tamin'ny fifidianana nifandresen-dahatra. Niresaka momba ny fiainana taloha an'i Al Gore sy i George W. Bush aho nandritra ny Tolom-piavotan'ny Amerikanina tamin'io tafatafa io.
Na dia tsy fantatro aza izy tamin'izany dia naman'i Al Gore i Uri. Taorian'ny resadresaka nifanaovana tamiko dia nilaza tamiko i Uri fa hiantso an-telefaona an'i Al Gore, izay tao amin'ny Trano Fotsy tamin'izany fotoana izany izy tamin'ny naha-filoha lefitra an'i Bill Clinton, hanoro hevitra azy momba izany vaovao izany.
Ireo tranga momba ny fanambadiana indray ireo dia mampiseho ny ataon'ny fahavalo amin'ny ady iray, toa an'i Howe | Goerge WH Bush, Morgan George W. Bush sy Gates | Gore, dia afaka miverina indray amin'ny fampiroboroboana idealy iombonana.
Nanana fahafinaretana aho nanatrika ny Sekreteram-panjakana George W. Bush, Condoleezza Rice, tamin'ny hetsika iray tany Washington, DC, izay nilazako azy ny momba an'i Daniel Morgan | Fijangajangana vovoka George W. Bush. Gaga izy rehefa fantany fa fantany ny momba an'i Daniel Morgan avy amin'ny Ady Revolisionera Amerikanina. Manantena aho fa nilaza tamin'ny lehibeny io fifandraisana taloha io izy.
Bill Clinton ho teraka tamin'ny fanamboarana ny Kongoley Kongoley Peyton Randolph
Ny fisakaizana ara-pientanam-po izay nivoatra teo amin'i George HW Bush sy ilay olona naharesy azy tamin'ny filatsahany ho fidiana ho filoham-pirenena, ny filoha Bill Clinton, dia nambara ho maro. Ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera, Clinton, tamin'ny fiainany taloha, no fantatra fa mpitarika ny Revolisiona Amerikana antsoina hoe Peyton Randolph.
Peyton dia filohan'ny kongresy kontinanta voalohany any Etazonia, saingy maty talohan'ny Kongresy Continental Faharoa, izay nanaovana sonia ny Fanambarana ny fahaleovan-tena. Na dia tsy ela velona i Peyton Randolph ka nanatri-maso ny famoronana an'i Etazonia, dia tonga nofo izy ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny 1992.
Nandefa kopia ahy aho revolisionera boky ho an'ny Filoha Clinton rehefa navoaka tao amin'ny 2003. Tena gaga sy feno fankasitrahana aho rehefa nahazo karatra avy taminy nisaotra ahy tamin'ilay boky, nanamarika fa "mahafinaritra" ny bokiko. Tsindrio eo amin'ny taratasy mba hanitarana azy io.
Ireo tranga ireo tamin'ny fanambadiana indray dia mampiseho fa ny fahavalo amin'ny ady aloha dia mety ho lasa mpiara-dia amin'ny antony lehibe kokoa, amin'ity tranga ity, ny anton'ny fahalalahana sy ny demokrasia.
Ireo tranga hafa momba ny fanambadiana ara-piraisana ara-politika amin'izao vanimpotoana izao dia ahitana ny:
Filoha Donald Trump
Filoha Vladimir Putin
Fitsipika momba ny fanambadiana vatana vaovao: porofon'ny fiainana taloha
Fiafaran-javatra teo amin'ny fiainana taloha: Ny endriky ny endriky ny admiral Richard Howe sy George HW Bush dia tsy mifanaraka tsara, toy ny hita ao amin'ny tranga hafa momba ny fanambadiana indray ao amin'ny vatana hafa.
Fiainana Taloha Taloha: Richard Howe dia mpitarika miaramila avy amin'ny Fanjakana Britanika, toa an'i George HW Bush izay mpanamory fiaramanidin'ny tafika amerikanina sy ny lehiben'ny Chief of the United States.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Richard Howe dia mpitarika miaramila britanika nandritra ny ady anelanelan'i Angletera sy Etazonia nifindra monina. Howe dia niorina ho any Etazonia ho George HW Bush, mpitarika ny demokrasia, hevitra iray izay tena tian'i Richard Howe.
Raha takatry ny olona fa afaka manova ny zom-pirenena, ny finoana ary ny fiombonana ara-poko avy amin'ny fiainana iray manontolo ny fanahy dia ho lasa milamina kokoa ny tontolo, satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy. Ny tranga iray dia ny:
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Voamarika fa i George WH Bush, tamin'ny lasa Admiral Howe, dia niara-belona tamin'i Daniel Morgan, Kolonely Patriot amerikana ary avy eo jeneraly tamin'ny ady revolisionera amerikana. Morgan teraka tamin'ny vatana vaovao indray ho George W. Bush, zanakalahin'ny amiraly Howe | George HW Bush. Araka izany, ny fahavalo mandritra ny androm-piainana iray dia mety ho lasa fianakaviana amin'ny iray hafa.
Toy izany koa, ny Jeneraly Patriot ao amin'ny ady Fort Ticonderoga, Horatio Gates, niorina indray tamin'ny Al Gore. Gates no manamboninahitra mpiandraikitra ny Kolonely Daniel Morgan. Nidera ny fitiavan-tanindraan'i Morgan tao amin'ny ady tao Ticonderoga ny vavahady, saingy naveriny indray ho fahavalo ara-politika ao amin'ny olona ao Al Gore sy George W. Bush.
Ankoatr'izay dia olona ambony miaramila nandritra ny fanompoan'i George HW Bush fony Filoha Amerikana no lasa mpitari-tafika amerikanina ho an'ny ady tany Afghanistan teo ambany fahefan'ny zanany lahy, filoha George W. Bush. Io Jeneraly Amerikana io, Tommy Franks, dia fantatra amin'ny maha-teraka tamin'ny taonan'i George Washington.
Washington, tsaroany, dia nanery ny tafika an-dRahalahy Richard Howe handroaka ny Hafenan'i Boston amin'ny sambony voasambotra tany Ticonderoga. Indray andro any, fahavalon'ny fiainan'i Richard Howe | George HW Bush sy George Washington Tommy Franks, dia nanjary nivadika ho lasa mpiray dina.
Ny teboka farany dia ny hoe ny mpitarika ny olombelona dia tsy maintsy miezaka mafy hiaro ny idealy ho an'ny tontolo milamina kokoa sy feno fangorahana, fahitana azoko antoka fa ny fanahin'i Admiral Richard Howe | Hanaiky ny filoha George HW Bush. Andriamanitra mitahy ny fanahiny.